काठमाडौँ उपत्यकामा खूल्यो डान्सबार, अन्य के–के ? – Taja Khawar
काठमाडौँ उपत्यकामा खूल्यो डान्सबार, अन्य के–के ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र २०, २०७८ समय: ०:३९:०८
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाका शिक्षण संस्था सञ्चालनमा लचकता अपनाइने भएको छ । करिब ६ महिनादेखि जारी निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै बुधबार काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले विद्यालयहरू सरकारबाट जारी ‘स्मार्ट लकडाउन’को प्रावधानभित्र रही यही २० गते आइतबारबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरूले जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डी–सीसीएमसी)सँग समन्वय गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै चलचित्र भवन, सार्वजनिक उद्यान, चिडियाखाना, स्विमिङ पुल, रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसाय डिस्को–डान्स, दोहोरी रेस्टुराँ, क्लब तथा पप बार पनि खुला गरिएको छ।
२०७७ साल चैतबाट बन्द यी व्यवसाय करिब ६ महिनापछि खुलेका हुन् । त्यस्तै अनावश्यक भीडभाड, सभा जुलुस, जात्रा महोत्सव, भोज र चाडपर्व मनाउन समेत निषेध गरिएको छ ।
मोबाइल गेम खेल्न रोक्दा घ’ट्यो यस्तो ड’रलाग्दो घ’टना, यो घ’टनाले सबैलाई बनायो च’कित !
September 3, 2021 234
आ’जभोलि समाजमा मोबाइलले स’कारात्मक कुरा मात्र नभई नक’रात्मक कुराहरु भित्रएको छ । मोबाइलले हाम्रो जीवन सहत बनाइदिएको छ तर त्यहि मोबाइलका का’रण मानिसहरुको जीवन पनि तहसनहस भइरहेको छ । त्यस्तै एउटा घटना भारतको गुजरातस्थित सुरतमा घ’टना भएको छ जहाँ पिताले जब आफ्नो किशोर छोरालाई मोबाइलमा गेम धेरै नखेल भनेर सधै गा’ली ग र्दा रहेछन। त्यही सुन्न नसकेका छोराले पितालाई घरमा नै घाँ’टी थि’चेर ह’त्या ग’रिदिएको खबर बाहिरिएको छ ।
यो घ’टनाले धेरैको मनमा ड’र पैदा ग’रिदिएको छ । अबका केटाकेटीहरुले यो घटना बाट के शिक्षा हासिल गर्लान भन्ने प्रश्न पनि खडा गरिदिएको छ । समाजमा दिनदिनै स’स्कृति संगै बि’कृतिहरु धेरै फैलिरहेको छ । मृ’तक अर्जुन अरुण आफ्नी श्रीमती र एक छोरासँग बस्दथे । मंगलबार अर्जुन अरुणलाई उनकी श्रीमती डलीले बेहोसीको स्थि’तिमा सूरतको नयाँ सिभिल अ’स्पताल पुर्याइन् जहाँ डाक्टरले अर्जुनलाई मृ’त घो’षित गरे । श्रीमती डली र उनका किशोर छोराले त्यतिबेला अस्पतालका डाक्टरलाई अर्जुन आठ दिन अघि बाथरुममा ल’डेको बताएका थिए ।
त्यतिबेला अर्जुनलाई चो’ट ला’गेको र मंगलबार उनी सुतेको स्थानबाट उठ्न नसकेको बताए । मृ’तक अर्जुन सरकारकी श्रीमती डली र उनका छोराको कुरामा डाक्टरलाई शंका लागेपछि उनीहरुले शवको पो’स्टमार्टम गर्ने नि’र्णय गरे । रिपोर्टमा अर्जुनको मृ’त्यु घाँ’टी थिcचेका कारण भएको पत्ता लाग्यो । यसबारे प्रह’रीलाई जानकारी दिइयो । सोधपुछमा १७ वर्षीय छोराले प्रह’रीलाई आफू दिनभरी मोबाइलमा गेम खेल्ने गरेको र यसका लागि पिता अर्जुन सरकारले उनलाई गा’ली ग’रिरहने भएकोले मंगलबार बुवा सुतिरहेका बेला आफूले यस्तो कार्य गरेको जानकारी दिए । प्रहरीले हाल अर्जुनकी श्रीमती डली र छोरालाई हि’रासतमा लिएर थप का रवाही सुरु गरेको छ । मोबाइल गेम खेल्नबाट रोक्दा सूरतमा भएको घ’टनाले सबैलाई चकित बनाइदिएको छ ।
Last Updated on: September 5th, 2021 at 12:39 am